Belavia-Belarusian Airlines dia nitokana ny serivisy Munich-Minsk
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Belavia-Belarusian Airlines dia nitokana ny serivisy Munich-Minsk
Jolay 15, 2019 Belavia nanatanteraka ny sidina mahazatra voalohany amin'ny zotra Minsk-Munich-Minsk. Ny sidina dia hatao in-4 isan-kerinandro amin'ny alatsinainy, alakamisy, zoma ary alahady miaraka amin'ny fiaingan'ny Minsk amin'ny 12:30 ary tonga ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Munich Franz Josef Strauss amin'ny 13:35. Ny sidina miverina avy any Munich hotontosaina amin'ny 14:15 ny alatsinainy, alakamisy, zoma ary alahady miaraka amin'ny fahatongavana ao amin'ny seranam-piaramanidina nasionalin'i Minsk amin'ny 17:15. Ny ora ho an'ny seranam-piaramanidina rehetra dia eo an-toerana.
“Ny fisokafan'ny sidina ho any Munich dia hetsika iray manan-danja tokoa izay efa niomaninay nandritra ny taona maro. Tamin'ny lohataona tamin'ity taona ity, ny manampahefana misidina fiaramanidina any Alemana sy Belarus dia nahavita fifanarahana hampitombo ny fahita matetika sy ny zotram-sidina ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'ireto firenena roa ireto. Noho io fanapahan-kevitra io dia afaka nanampy an'io lalana vaovao io ho an'ny tambajotram-pifamoivoizany i Belavia. Manantena izahay fa hanakaiky kokoa ny firenentsika amin'ny lafiny rehetra: ny fampandrosoana ny fifandraisan'ny orinasa, ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny samy kolontsaina ary ny fanamafisana ny fifandraisana ara-toekarena sy ara-toekarena. Ho fanampin'izany, ny Belarusians dia ho afaka hahafantatra ny kolontsain'ny iray amin'ireo tanàna mahaliana indrindra any Eropa, izay handray anjara amin'ny fampidirana kolontsaina any Minsk sy Munich. Ho an'ireo vahininay, ny seranam-piaramanidina Minsk National dia mety ho lasa ivon-toerana iraisam-pirenena mety amin'ny sidina mankany amin'ny firenen-kafa. Ny fandaharam-potoanan'ny sidina dia natao mba hahafahan'ny mpandeha manao fifindrana amin'ny sidina tadiavin'izy ireo ”, - hoy i Anatoly Gusarov, Tale Jeneralin'ny Belavia-Belarusian Airlines.
Ny sidina Embraer-175 dia hiasa miaraka amin'ny habaka hipetrahana ho an'ny olona 76. Ny faharetan'ny sidina dia manodidina ny 2 ora.
Ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Munich dia nanjary seranam-piaramanidina fahefatra amin'ny làlana alemana amin'ny tambajotram-pifandraisana Belavia-Belarusian Airlines. Amin'izao fotoana izao, ny zotram-piaramanidina belarosiana dia miasa sidina mahazatra mankany amin'ny seranam-piaramanidin'i Berlin, Frankfurt ary Hanover.
”Ny seranam-piaramanidina Munich dia miarahaba am-pitiavana ny fifandraisana Belavia vaovao misy eo amin'ny seranam-piaramanidina Minsk sy Munich. Ity zotra ity dia efa notadiavina hatry ny ela satria i Minsk dia iray amin'ireo toerana ambony tsy voaroan'ny seranam-piaramanidina Munich ”, - hoy i Michael Kerkloh, Tale Jeneralin'ny seranam-piaramanidina Munich.
Munich no renivohitry ny fanjakan'ny fanjakan'i Bavaria. Ity tanàna ity dia hahaliana an'ireo te-hitsidika tranombakoka, izay itazonana ny sanganasan'ny hosodoko malaza, hianatra momba ny fomba maritrano isan-karazany ary hitsidika ny tranombakoka BMW. Ny seranam-piaramanidina Iraisampirenen'i Munich dia 30 kilometatra miala ny tanàna. Ny làlana mankeny amin'ny seranam-piaramanidina dia mitaky 40-50 minitra miankina amin'ny fitaterana voafantina.
Misokatra ny trano fisakafoanana jono vaovao any Zimbaboe
Ny zotram-piaramanidina fiaramanidina Royal Flight an'i Rosia dia mandefa ny sidina Moskoa-Hefei